Led Display၊ Led Screen၊ Led Video Wall၊ Led Billboard
ကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်
ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ဘေလ်ဘုတ်
ပတ်ပတ်လည် LED မျက်နှာပြင်
ကြမ်းပြင် LED Display
640 x 480 မီလီမီတာ
COB LED မျက်နှာပြင်
600×337.5mm Standard Size ViuTV Series သည် 16:9 ရွှေရောင်အချိုးကို ခံယူသည်...
ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ဘေလ်ဘုတ် O...
960x960mm Standard Size SRYLED MG စီးရီး LED display panel သည်...
အငှား LED ဖန်သားပြင် ပြင်ပ F...
ဘယ်နှင့်ညာ Modules များအတွက် ခြားနားချက်မရှိပါ...
SRYLED သည် 2013 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shenzhen အခြေစိုက် ထိပ်တန်း LED display ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် အရည်အသွေးမြင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များစွာကို ပေးဆောင်ရန် အထူးပြုပါသည်၊ အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်၊ မိုးလုံလေလုံနှင့် ပြင်ပအငှား LED display အပါအဝင်၊ ဘောလုံးပတ်လည် LED မျက်နှာပြင်၊ သေးငယ်သော LED မျက်နှာပြင်၊ ပိုစတာ LED မျက်နှာပြင်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော LED မျက်နှာပြင်၊ တက္ကစီထိပ်တန်း LED မျက်နှာပြင်၊ ကြမ်းပြင် LED မျက်နှာပြင်နှင့် အထူးပုံဖော်ဖန်တီးထားသော LED မျက်နှာပြင်။
2022 ခုနှစ်ကတည်းက XR virtual ထုတ်လုပ်မှုသည် ပြည်တွင်းရှိ တီဗီစတူဒီယိုများ၏ မီးမောင်းထိုးပြဖြစ်လာခဲ့သည်...
COB LED Display ကို ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲ။
မည်သည့်ခေတ်၏တိုးတက်မှုသည် နည်းပညာနှင့် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို မွေးဖွားပေးလိမ့်မည်။...
မှန်ကန်တဲ့ Brightness ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ...
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း LED မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုသည်အရေးကြီးသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ယူနစ်အတွက်...
COB- အနာဂတ် LE အတွက် အဓိက လမ်းကြောင်း...
Micro-pitch စျေးကွက်သည် ဆက်လက်ပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ 4K နှင့် 8K high-definition များသည် တဖြည်းဖြည်း...
Driver IC သည် အရေးကြီးသော R...
LED display driver ထုတ်ကုန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် row scan driver chip နှင့် column driver chip များပါ၀င်သည်...
ဘေဂျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲ ပိတ်...
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်က ၁၇ ရက်ကြာ တောက်လောင်ခဲ့သော အိုလံပစ်မီးလျှံသည် ဖြည်းညှင်းစွာ ငြှိမ်းသတ်သွားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး LED Display...
2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ ညနေတွင် N ၏ မြေပြင်ပေါ်တွင် ဧရာမ LED မျက်နှာပြင်...
LED Display များသည် 2022 Wi...
ဘေဂျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ နိဂုံးချုပ်ပြီး...
SRYLED Luna မှ အလုပ်ပြန်ဆင်းသည်...
ချစ်လှစွာသောဖောက်သည်များနှင့်သူငယ်ချင်းများ၊ SRYLED သည် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိပါပြီ၊ LED များအားလုံး...
2021 မှ 2022 ခုနှစ်အထိ၊ Metaverse သည် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လိုချင်သောနယ်ပယ်အသစ်ဖြစ်လာသည်...
2022 ခုနှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်...
SRYLED ကို လိုက်လျှောက်ကြသော ချစ်လှစွာသော ဖောက်သည်များနှင့် သူငယ်ချင်းများ ၊ 2021 ကုန်သွားပါပြီ ၊ နှင့် 2022 အသစ် ၊ အပြည့်...
ရောင်စုံ LED display အစုံအလင်တွင် အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာ၊ ထိန်းချုပ်မှု...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ မက်ဆေ့ခ်ျချန်ထားခဲ့ကာ 8 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
SRYLED ကား LED မျက်နှာပြင်သည် ကားမော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပြီး အများအားဖြင့် တက္ကစီခေါင်မိုးတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။၎င်း၏တောက်ပမှုကို အချိန်အမျိုးမျိုးတွင် အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည် (အလင်းအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုထည့်ရန် လိုအပ်သည်)။
SRYLED ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်သည် IP 65 ရေစိုခံအဆင့်ရှိပြီး ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။မြင့်မားသောတောက်ပမှု 4500 - 7000 nits ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်၊ ကွဲပြားခြားနားသောပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
UHD LED ရုပ်ထွက်
SRYLED သည် အသေးငယ်ဆုံး pitch LED display P0.9 ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် သေးငယ်သော ဧရိယာဖြင့် အမှန်တကယ် 4K နှင့် 8K ရုပ်ထွက်ကို ရရှိနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် P1.25, P1.56, P1.6, P1.8, P1.9 HD LED မျက်နှာပြင်လည်း ပါရှိပါသည်။
Stage LED မျက်နှာပြင်
SRYLED အဆင့်ရှိ LED မျက်နှာပြင်သည် ပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် လွယ်ကူသည်။LED panel တစ်ခုသည် 10 စက္ကန့်အတွင်း တပ်ဆင်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စင်မြင့် LED မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် 3840Hz မြင့်မားသော refresh rate ရှိသည်။
ပိုစတာ LED မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်သောအခါ၊ ၎င်းကိုမှန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ဖွင့်သည့်အခါ၊ ကြော်ငြာအတွက် ဗီဒီယိုနှင့် ပုံများကို ပြသနိုင်သည်။ပြပွဲ၊ ဘားများ၊ လက်လီစတိုးဆိုင်များနှင့် လုပ်ငန်းရှေ့စားပွဲအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်တစ်ခု။
ကား LED ရုပ်ထွက်